Warshadaha iyo Aqoon isweydaarsiga - Guangzhou Airwoods Environment Technology Co., Ltd.
Warshadaha Warshadaha Warshadaha HVAC
Warshadaha waxsoosaarka had iyo jeer waxay leeyihiin baahi xoog leh qaboojiyaha maadaama ay yihiin kuwa ugu waaweyn ee isticmaala tamarta dhinacyada kala duwan. In ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo la xaqiijiyay ah oo ku saabsan ganacsiga / warshadaha HVAC naqshadeynta iyo rakibaadda, Airwoods waxay si fiican u taqaanaa baahida cimilada adag ee wax soo saarka iyo tas-hiilaadka warshadaha. Iyadoo loo marayo qaab-dhismeedka nidaamka ugu habboon, xisaabinta xogta saxda ah, xulashada qalabka iyo habeynta hawada, Airwoods waxay habeysaa xalka hufan iyo keydinta tamarta ee macaamiisha, hagaajinta wax soo saarka iyo yaraynta kharashyada ganacsiga soo saarista si loola kulmo macaamiisheenna dalabaadka aadka u adag.
Shuruudaha HVAC ee Warshadaha & Aqoon Isweydaarsiga
Qaybta waxsoosaarka / warshadaha waxay u taagan tahay baahiyo badan oo kululeyn iyo qaboojin, iyadoo warshado shaqsiyeed iyo aqoon isweydaarsi mid waliba leeyahay shuruudihiisa u gaarka ah. Warshadaha ku shaqeeya wareegga wax-soo-saarka 24-ka saacadood waxay u baahan yihiin nidaam HVAC ah oo si gaar ah u xoog badan oo ilaalin kara jawi joogto ah oo lagu kalsoonaan karo oo leh dayactir yar. Soosaarida alaabooyinka qaarkood waxay ubaahan kartaa xakameyn cimilo adag meelaha waaweyn oo aan wax yar ka badali karin heerkulka, ama heerkulka kala duwan iyo / ama heerarka qoyaanka ee qaybaha kala duwan ee xarunta.
Marka alaabada la soo saarayo ay soo saarto kiimikada hawada ku jirta iyo wax soo saarkeeda, hawo habboon iyo shaandhaynta ayaa lagama maarmaan u ah ilaalinta caafimaadka shaqaalaha iyo wax soo saarkooda. Soosaarida qalabka elektarooniga ama kombiyuutarka ayaa sidoo kale u baahan kara xaalado nadiif ah.
Aqoon isweydaarsiga gawaarida
Aqoon isweydaarsi elektaroonig ah
Aqoon isweydaarsiga cuntada
Waxaan qorsheyneynaa oo dhiseynaa tayo sare, waxqabad sare, xalal HVAC caadadiisu dabacsan tahay oo loogu talagalay noocyo kala duwan oo wax soo saar iyo soosaarid warshadeed ah, oo ay kujiraan soosaara culus, warshadaha cuntada iyo cabitaanka, soosaarka tikniyoolajiyadda sare, iyo soosaarka dawooyinka ee ubaahan jawiga nadiifinta.
Waxaan u wajaheynaa mashruuc kasta sidii kiis gaar ah, mid walbana leh caqabado u gaar ah oo wax looga qabanayo. Waxaan qabannaa qiimeyn buuxda oo ku saabsan baahida macaamiisheena, oo ay kujiraan cabbirka xarunta, qaab dhismeedka, meelaha shaqada, heerarka tayada hawada ee loo qoondeeyay iyo shuruudaha miisaaniyadda. Injineeradayadu waxay markaa dejinayaan nidaam ku habboon shuruudahan gaarka ah, ha ahaato iyada oo la cusbooneysiinayo waxyaabaha ku jira nidaam jira, ama dhisid iyo rakibid nidaam gebi ahaanba cusub. Waxaan sidoo kale bixin karnaa nidaam kormeer caqli-gal ah oo kaa caawinaya inaad nidaamiso aagag gaar ah waqtiyada gaarka ah, iyo sidoo kale adeegyo kala duwan iyo qorshooyin dayactir ah si nidaamkaagu ugu socdo sida ugu fiican sanadaha soo socda.
Wax soosaarka iyo tas-hiilaadka warshadaha, waxsoosaarka iyo waxtarka ayaa fure u ah guusha, nidaamka HVAC oo aan tayo lahayn ama aan ku filnayn ayaa labadaba saameyn xun ku yeelan kara. Taasi waa sababta Airwoods ay u jilicsan tahay inay u bixiso xalal waara, la isku halleyn karo oo hufan macaamiishayada warshadaha, iyo sababta ay macaamiisheennu ugu yimaadeen inay ku tiirsanaadaan si aan shaqada u helno markii ugu horreysay.
Nidaamka Rinjiga Nederlandka HVAC
Shirkadda Gawaarida ee Beijing AHU
Aqoon-isweydaarsiga Xidhmada Mooncake
Nidaamka Diiwaanka Vinyl HVAC
Warshad Daabacaadda Fiji HVAC
Isweydaarsiga kuleylka ee Rotary ee Samsung Factory